Xog: Xaguu ku dambeeyey shirkii uu Farmaajo iclaamiyey ee lagu soo bandhigi lahaa xaqiiqda kiiska Ikraan? | Dalkaan.com
Home Warkii Xog: Xaguu ku dambeeyey shirkii uu Farmaajo iclaamiyey ee lagu soo bandhigi...
Xog: Xaguu ku dambeeyey shirkii uu Farmaajo iclaamiyey ee lagu soo bandhigi lahaa xaqiiqda kiiska Ikraan?
Muqdisho (dalkaan) – Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 8-dii September, oo hadda laga joogo bil, wuxuu iclaamiyey shirka golaha amniga Qaranka si warbixin looga dhageysto taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Shirkaan oo loo ballansanaa 18-kii bishii lasoo dhaafay ayaa baaqday.
Previous articleBarcelona oo dib u soo cusbooneysiin doonta xiisaha Tottenham Hotspur ee Tanguy Ndombele?
Next articleSawirro: Shirkada Somtel oo toddobaadkii 12-aad abaal-marisay 1000 macaamiil